I-alumina ceramic crucible - XTL
Usendaweni efanele ye- I-alumina ceramic crucible.Okwamanje usuyakwazi lokho, noma ngabe yini oyifunayo, uqinisekile ukuthi uyokuthola kuvuliwe XTL.siqinisekisa ukuthi kulapha XTL.
Umkhiqizo ubonisa ukuguquguquka okuphezulu kwezinga lokushisa eliphansi. Kukhona izivivinyo ezimbili zezinga lokushisa eliphansi eziye zasetshenziswa ekuhloleni izici zayo ezifana nokuhlolwa kokuqina kwezinga lokushisa eliphansi nokuhlolwa kokuhoxiswa kwezinga lokushisa..
Sihlose ukunikeza ikhwalithi ephezulu kakhulu I-alumina ceramic crucible.kumakhasimende ethu wesikhathi eside futhi sizobambisana namakhasimende ethu ngokunikela ngezixazululo ezisebenzayo nezinzuzo zezindleko.
Inkampani ehamba phambili ye-Alumina ceramic crucible - XTL
I-alumina ceramic crucible uma iqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa ngokuya ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi ijabulela idumela elihle emakethe.I-XTL ifingqa iziphambeko zemikhiqizo edlule, futhi iqhubeka ikuthuthukisa. Ukucaciswa kwe-Alumina ceramic crucible kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho.